''အနုပညာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံနဲ့ အခြားနိုင်ငံ ပူးပေါင်းလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် သူ? - Yangon Media Group
သင်္ကြန်အပြီးမှာ စာအုပ်များရော သီချင်းများပါ ထွက်ရှိလာဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ စာရေးဆရာ၊ တေးရေး၊ အဆိုတော်အရိုးနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း…
မေး- စာအုပ်တွေ ထွက်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ ဘယ်တော့လောက် ထွက်ဖြစ်မလဲ။
ဖြေ- သင်္ကြန်ပြီးသွားရင်တော့ စာအုပ်တွေ ထွက်ဖို့ရှိပါတယ်။ စာအုပ်ကတော့ အရင်ထွက်ထားတဲ့ ပုံစံမျိုးလေးတွေနဲ့ မတူအောင်တော့ လုပ်ထားပါတယ်။
မေး- စာအုပ်ထုတ်ဝေတဲ့အခါမှာရော ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေ ရှိနိုင်လဲ။
ဖြေ- စာအုပ်ထုတ်တဲ့ အပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း ဖြန့်ချိရေးပုံစံက နည်းနည်းပြောင်း နေတယ်။ အခုဟာက အိမ်တိုင်ရာရောက် ပို့ဆောင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကလည်း အများကြီး ပေါ်လာပါပြီ။ အခုဟာက စာအုပ်အငှားဆိုင်တွေကလည်း မရှိတော့ ဘူးဆိုတော့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ရောင်းရမယ်လို့ မြင် ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ကိုယ်တိုင်လည်း ထုတ်ဝေသူ လုပ်နေတာကြောင့် ကိုယ့်စာအုပ်များလားရင် ပို့လိုက်တာမျိုးလည်းရှိတော့ ရောင်းတာကတော့ ရောင်း နေရပါတယ်။
မေး- သီချင်းပိုင်းတွေရော လုပ်ဖြစ်နေတာရှိလား။
ဖြေ- သီချင်းတွေလည်း လုပ်ဖြစ်နေပါတယ်။ သီချင်းအနေနဲ့ကတော့ ခေတ်ကလည်း ပြောင်းလာတော့ ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ တစ်ပုဒ်ချင်းစီကို အွန်လိုင်းပေါ်မှာ တင်သွားဖို့ ရှိပါတယ်။ သီချင်းတွေကတော့ ကျွန်တော်အရင်တုန်းက ဆိုနေကျ ဂီတပုံစံမျိုးလေးတွေပဲ ဖြစ်မယ်။ ထွက်လာမှာကတော့ မိုးတွင်းမတိုင်ခင်လောက်တော့ ထွက်လာဖို့ကို ကြိုးစားနေပါတယ်။ သီချင်းထွက်လာရင်တော့ MTV ပါရိုက်မလားဆိုတာကတော့ မစဉ်းစားရသေးပါဘူး။ အရင်ဆုံးတွေးထားတာကတော့ အသံအရင်သွင်းလိုက်မယ်လို့ပဲစဉ်းစားပါ တယ်။
မေး- မူပိုင်ခွင့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ရော လက်ရှိအခြေအနေကို ဘယ်လိုမြင်လဲ။
ဖြေ- ကျွန်တော်တို့ အဲဒါက အကုန်လုံးနဲ့ ဆိုင်တယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ကျွန် တော့်အမြင်အရ ပြောရရင်တော့ ကိုယ်ဖန်တီးထားတာတွေကို သူများနိုင်ငံတွေ မှာ သွားရောင်းတာမှ ပိုပြီး အဆင်ပြေဦးမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ မူပိုင်ခွင့်နဲ့ ပတ် သက်ရင် အစိုးရက လုပ်ပေးမှဖြစ်မှာပါ။
မေး- မူပိုင်ခွင့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း လက်ရှိမှာ ဥပဒေတွေ ရေးဆွဲနေပေမယ့် အချိန်ကာလ ကြာတဲ့အပေါ်မှာရော ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
ဖြေ- ဟုတ်ပါတယ်။ လုပ်နေတာတွေကိုလည်း တွေ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကြာနေတဲ့အခါကျတော့ လူတိုင်း နစ်နာနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေဆိုတာကလည်း တိုင်းပြည်ရဲ့ ထုတ်ကုန်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအနုပညာတွေကိုသာ တိုင်းပြည်ရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေလို့ မြင်လာမယ်ဆိုရင် တိုင်းပြည်ရဲ့ အခွန်ဝင် ငွေလည်း ပိုတိုးလာနိုင်ပါတယ်။ ဥပဒေအရတွေ ရှိလာမယ်ဆိုရင် အားသာချက်တွေက အများ ကြီး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်၊။ ဒီအနုပညာအလုပ်တွေကို ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက ပညာရှင် တွေနဲ့ အခြားနိုင်ငံက ပညာရှင်တွေ ပူးပေါင်းပြီးတော့ လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် သူတို့ ဘက်က အရင်မေးတာက မူပိုင်ခွင့်ကိစ္စပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာဖန်တီးတဲ့ သူ တစ်ယောက်က ဒီမူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွေကိုပါ လိုက်လုပ်နေရတယ် ဆိုရင် သိပ်အဆင်မပြေတော့ပါဘူး။
မေး- သီချင်းတွေကိုရော Free Download Link ပဲ ပေးမှာလား။
ဖြေ- ကျွန်တော် စဉ်းစားထားတာကတော့ တင်ပြီးတော့ပဲ ရောင်းလိုက်မယ်။ တန်ဖိုးထားတဲ့သူကတော့ ဝယ်သွားမယ်။ တချို့ပရိသတ်တွေကလည်း ရိုးရိုးပဲ နားထောင်ချင်တယ်ဆိုတော့ င်္မနန ပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဟာက ဒီမှာ ရှိတဲ့ အနုပညာရှင်တွေက ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ကိုင်နေကြရတယ်။
''Rock ကို အရမ်းကြိုက်ပေမယ့် ကိုယ့်အသံ အခြေအနေအရနဲ့ မိန်းကလေးလည်း ဖြစ်တာကြောင့် ရောခ့်တွေ အရမ်?
ဘောလိဝုဒ်မှာ အမျိုးသမီးများအပေါ်ထားတဲ့ အမြင် ပြောင်းလဲလာပြီလို့ ရှရွတ်ခန်း ဆို
အစိုးရသစ်တက်လာပြီး သုံးနှစ်ခန့်အကြာ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည်
တောင်ကိုရီးယား BIGBANG’s ပေါ့ပ် ဂီတပညာရှင် တေယန်း စစ်မှုထမ်းဆောင်ရမည်